बोइला बीट्स को लाभ
सामान्य चोटी (रातो), हामीलाई प्राचीन समय देखि ज्ञात छ। यस दिनको यो जंगली बढती फारम चीन र तीर पूर्वमा पाइन्छ। हिप्पोक्रेटले धेरै रोगहरूका लागि उकालो बीटका फाइदाहरूको बारेमा पनि लेखे।
पकाएको बीट को उपयोग र लाभ
आज बीतले संसारभरि लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। अन्य सब्जियों को बीच मा लोकप्रियता जहाँ पनि यो नक्शा मा ठाउँ खोज्न गाह्रो छ। कारण यसको प्रयोग, उपलब्धता र सस्तोता हो। यस अवस्थामा, बीट लामो समयसम्म भण्डारणमा अनुकूल छ।
बीटहरू खाएका छन् र पकाएको र ताजा। बीतबाट बोर्सल्ट संसारभरको हृदय जितेको छ! ताजा युवा जनावरको कास धेरै उपयोगी छ। र चुकुरी पातहरू धेरै भिटामिन ए हुन्छन्, तिनीहरू सलाद र बोटभाइनासमा प्रयोग हुन्छन्। लसुन र मेयनेज संग उबला वा ताजा बीट बाट यो धेरै लोकप्रिय सलाद हो।
यहाँ सम्म कि उबला बीटहरु लाई उनको उपयोगी गुणहरु लाई बरकरार राख्छ, किनकी बी विटामिन र खनिज लवण युक्त फलाम, सोडियम, पोटेशियम गर्मी को लागि धेरै संवेदनशील छैन, र अमीनो एसिड को एक ठूलो सामाग्री, विशेष रूप से बेन को प्रोटीन को उचित एसिलेशन मा योगदान गर्दछ, sclerotic घटना को विकास को रोकथाम र जिगर को मोटापे को रोकथाम । यो पदार्थ खाना पकाउँदा पनि नष्ट छैन, जुन शरीरको लागि उबलाएको बीटहरूको प्रयोग भन्दा धेरै चोटि छ।
वजन घटाने को लागि उबला बीट
उकालो बीट्स को स्पष्ट लाभ र कम कैलोरी सामाग्री (37 केसल!) विभिन्न आहारहरु को वजन घटाने को लागि प्रशंसकहरु द्वारा अचम्म लागेन। एक उचित अनलोड गर्ने आहारको रूपमा, तपाईं कम बोसो व्यंजनहरूमा उबली बीट र ताजा मासु लगाइएको गाजरको साइड डिश सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आहारले तपाईंलाई केवल आंकडा राख्न को लागी, उपयोगी वस्तुहरु संग शरीर र यसलाई विषाक्त पदार्थ र अन्य हानिकारक पदार्थहरु हटाउन मद्दत गर्नेछ।
बादामको लागि के उपयोगी छ?
उपयोगी बकसुआ पोर्चुगल के हो?
सुँगुर कबाबको पोर्किक सामग्री
ओठ दूध राम्रो र खराब छ
बीवर मासु - उपयोगी गुणहरू
आइसक्रीम - क्यालोरी
गुलाबबाट जाम - राम्रो र खराब
ट्रेडमिलमा कसरी व्यवहार गर्ने?
अनार वजन घटानेका लागि
स्पोर्ट्स पूरकहरू सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प हुन्
वजन घटाने को लागि दलिया
तिब्बत दूध मशरूम - उपयोगी गुणहरू
निक्टेरी - कैलोरी सामग्री
व्यायाम पट्टा गर्नुहोस्
गर्मीमा बच्चाहरूको लागि यार्ड खेल
च्यानिङ टटमको श्रीमतीले उनलाई 36 वर्षसम्म घोडा दिए
जाडोको लागि अनुयायी - जाम, तुलना र जामुन बनाउनको लागि उत्तम विचार
किशोरहरूको लागि लोकप्रिय किताबहरू
जापानी स्पिन्डल - कसरी राम्रो तरिकाले रोप्न र बिरुवाको हेरचाह गर्ने?
परियोजना "सेक्स र सिटी" स्क्रिनमा फर्काउँछ?
लेडी गागा र टेलर किनीले बिस्तारै केहि गर्न प्रयास गरे
जब बिरुवाहरूमा पोतिनिया बोल्नु हुन्छ?
42 पैसा बचत गर्न सजिलो तरिका
अहिले सेक्स गर्ने7कारणहरू
दोस्रो पटकको लागि ग्यालेडोट मा आमा बन्यो
3 महिना मा बच्चा मा स्लोबर
Chloe Moret स्वीकार गरे कि उनको ब्रुकलिन Beckham संग एक सम्बन्ध थियो
शरद 2013 सेट
स्यान्ड्रा बलक र ब्रायन रन्ण्डल अब पति र पत्नी हुन्
25 असामान्य रूपहरु को शक्ति, जसको अस्तित्व तपाईंले विचार गर्नुभएन
रूखमा रूखहरू आफ्नै हातले
ककड़ी संग गोभी का सलाद